Shacabka Muqdisho oo qaati ka taagan wadooyinka deg dega lagu xiraayo | SMC
Home WARARKA MAANTA Shacabka Muqdisho oo qaati ka taagan wadooyinka deg dega lagu xiraayo
Shacabka Muqdisho oo qaati ka taagan wadooyinka deg dega lagu xiraayo
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa mararka qaar waxaa ay si kedis ah ku xiraan wadooyinka waaweyn ee Magaalada Muqdisho, iyada oo taasi ay dhibaato ku tahay dad Shacabka ah.
Shalay Ciidamada Ammaanka ayaa xiray qaar kamid ah wadooyinka muqdisho, xilli Muqdisho aas qaran loogu sameeynayay Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeyr oo ku geeriyooday magaalada jigjiga ee dowlad degaanka Soomaalida.
Maanta Shacabka muqdisho ayaa la kulmay qaar kamid ah Isgoysyada muqdisho oo xiran, isla markaana Gaadiidka dadweynaha iyo midka sida gaarka loo leeyahay loo diidayo.
Qaar kamid ah Shacabka ku nool Muqdisho waliba cagtooda maalayay ayaa SMC TV waxaa ay u sheegeen inay dhibaato ku tahay wadooyinka sida deg dega ah loo xirayo, iyaga oo dowladda ka codsaday in Maalin ka hor ay kusii wargeliso in wadooyinka la xirayo.
Previous articleKashifaad: Wax ka Ogow Amarrada ladul dhigey RW Rooble intii uu socdey kulankii Habar-Khadiija.